Malagasy / | By lalignedemire
Manararaotra amin’ny pesta ny mpivarotra-Niakatra 2 200 Ar ny kilaon’ny makalioka
Misy te hanankarena tampoka eto amin’ny firenena, ka izay tranga miseho rehetra dia hararaotina avokoa entina handetehana ny fiainan’ny mpiara-belona aminy. Nanomboka ny faran’ny herinandro, dia niakatra 2 200 Ar ny kilaon’ny vary makalioka fotsy, ny vary “riz de luxe” avy any ivelany indray no moramora ny vidiny.
Tsy tokony ho izany anefa no vidiny satria maina ny tany ka tsy afaka hilaza fa ratsy lalana ny mpanangom-bokatra, tsy vitan’izany fa efa mba nanao izay azony atao ny fanjakana nanafatra vary avy any ivelany, mba hiatrehana ny maitso ahitra kanefa dia vao mainka toa anaovan’ireo mpijirika vary fanahy iniana ampakarina ny vidim-bary. Tsy mety fay mihitsy ireo mpivarotra mpamongady ireo fa manao izay saim-patany amin’ny fivarotana ity vary ity. Rehefa ataon’ny fanjakana anefa ny fanagiazana ny entan’izy ireny dia minainaina tsy misy tahaka izany. Ny mpiara-belona aminy ihany no vonoiny. Zaran’izy ireo aza misy ny pesta mba ahafahana mampakatra ny vidim-bary satria tsy ho afaka hanara-maso ny fanjakana fa variana any amin’ny pesta!
Manavesatra ny fahasahiranam-bahoaka
Tsarontsika tsara fa rehefa nidangana ny vidim-bary teto Antananarivo dia nanao fidinana ifotony teny amin’ny mpivarotra mpamongady ny minisitra ny Varotra. Afaka 24 ora taorian’iny, dia nidina 200 Ar ny kilaon’ny vary. Tamin’izany fotoana izany dia mba efa tafidina 1 500 Ar ny kilaon’ny vary. Amin’izao fotoana izao, dia ataontsika hoe 2 volana, na 3 volana aty aoriana dia io fa niakatra indray. Izany hoe mila andrasana tahaka ny miandry fody eny an-tanimbary koa ve izany ireo mpamongady vao tsy hanararaotra ny fahasahiranan’ny vahoaka efa difotry ny fikorontanan-tsaina manoloana izao resaka pesta izao? Nahoana raha tsy manao izany fomba fisainana izany ? fa mitondra mankaiza anefa izay vola mety ho azo ao anatina fahasahiranan’ny olona tahaka izany ? Misy amin’izy ireo no milaza fa mbola tsy nahazo anjara tamin’ireo vary nafarana, ka ny masonkarenan’izy ireo tamin’ireo vidim-bary teo aloha no mbola lafo. Ny tena marina na dia masonkarena teo aloha aza dia tsy tokony hiakatra ny vidim-bary satria efa nisy ny vidiny nifanarahana tamin’ny fanjakana.
Ny Aina Razaka